Inona ny tranokala Web? Top 10 Python Libraries - Semalt Expert
Ny famafazana tranonkala dia fomba mahomby hanangonana vaovao avy amin'ny Internet. Ny rindrambaotin'ny tranonkala dia miditra amin'ny World Wide Web amin'ny fampiasana ny Protocol Hypertext Transfer, manangona angona avy amin'ny toerana samihafa, ary manova azy ho endrika azo vakina sy azo henoina. Ny Bots dia mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fanangonana sy ny fitrandrahana. Izy ireo dia manampy amin'ny fametrahana votoaty voasintona ao anaty tahiry fototra ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto.
Ny tranokala dia natsangana tamin'ny fampiasana ireo programa samihafa (HTML sy XHTML). Izany no mahatonga ny orinasa hanangana rafitra samihafa ary miankina amin'ny famakafakan'ny DOM, ny fahitana amin'ny ordinatera ary ny fomba amam-pitenenana voajanahary mba hanamboarana ny fitondrantenan'olombelona.Ny fanalana ny data dia heverina ho toy ny dokambarotra adala sy tsy mahazatra, fa ilaina ihany koa ho an'ny orinasa, mpandrindra ny programa, tsy mpanodina, webmasters, mpanao gazety, mpizara dizitaly ary mpanoratra manerantany.
A web dia API izay manampy amin'ny fanangonana vaovao avy amin'ny toerana samihafa. Ny orinasa tahaka an'i Google sy Amazon dia manome tolotra sy fitaovana samihafa amin'ny tranonkala. Ny endri-tsoratra farany farany amin'ny tranonkala dia famahanana data, RSS feeds, feed feeds RSS ary ATOM. Ny JSON sy ny CSV dia ampiasaina ho rafitra fitehirizana fitaterana eo amin'ireo serveur web sy client. Octoparse, Import. io, Kimono Labs sy ParseHub no fitaovana maoderina malaza indrindra amin'ny web . Izy ireo dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama ary afaka mahavita asa maro ho anao. Vantany vao nalefa sy nakarina dia afaka manaparitaka pejy maro an-jatony ao anatin'ny ora iray ireo fitaovana ireo.
Top 10 Python tranomboky ho an'ny tranonkala fanalana ny tranonkala:
Python is a programming language. Manana rafitra dynamique sy fitantanana fitadidiana izy io. Python dia manohana ny programam-paradigma samihafa, toy ny object-oriented, functional, procedural ary imperative. Manana tranokala maromaro maromaro izy io, fa ireo tranokala malaza Python no voalaza eto ambany.
1. Ny fangatahana
Ny fangatahana dia tahiry HTTP Python izay mifantoka amin'ny fifandraisana amin'ny tranonkala samihafa. Afaka mitantana cookies izy, manara-maso ny fivoriana miditra an-tsoratra, ary mitantana ireo tranonkala izay midina na maka fotoana lavalava hamaliana. Izy io dia mahazo alalana amin'ny licence Apache2, ary ny tanjon'ny fangatahana dia ny mandefa ny fangatahana HTTP amin'ny fomba feno sy feno.
Scrapy dia rindrambaiko web izay manampy amin'ny fampitaovana vaovao mahasoa avy amin'ny vohikala samihafa.
SQLAlchemy dia tranomboky fitahirizan-drakitra izay ilaina ho an'ny mpandrindra ny programa sy web developers.
Ity tranonkala HTML sy XML ity dia ilaina ho an'ny mpikirakira sy webmaster.
Izany dia fitaovana hiasa amin'ny tahirin-kevitra XML sy HTML. Manampy amin'ny fanombantombanana ireo mpilatsaka hofidiana XPath sy CSS ary mahita singa mifandraika amin'ny harato.
Ity tranomboky Python ity dia manampy amin'ny fanatontosana ny adihevitra amin'ny 2D game development.
Izy io dia 3D animation matanjaka sy mozika kreôla lalao, izay malaza amin'ny interface-friendly interface.
8. Nltk (Toolbutton amin'ny natiora)
Manampy ny manova andalana maro sy afaka manao asa maro amin'ny fotoana iray.
Nose dia rafitra fanandramana ho an'ny Python ampiasain'ny mpandahateny an-jatony manerana izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny SymPy, afaka manao asa maro ianao ary manombana ny kalitaon'ny votoatin'ny tranonkala Source .